७० लाख नेपाली श्रमिक सोध्दै छन् : हामी नागरिक होइनाै‌ँ ?
रमेश भारती काठमाडौं, २९ फागुन
सरकारले गत महिना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि चीनबाट १ सय ७५ जना नेपालीको उद्धार गरी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त काममा चौतर्फी प्रशंसा भयो । धेरै जनताले राज्य भएको अनुभूतिसमेत गरेका थिए । तर, मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले दिएको अभिव्यक्तिपछि पुनः देश, विदेशमा रहेका नेपालीमा निराशा छाएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंकामा चीनको वुहानबाट उद्धार गरेकालाई जस्तो अन्य देशमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न सरकारले नसक्ने बताएका थिए ।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएका अन्य देशबाट उद्धार गरेर ल्याइएकालाई सरकारसँग क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था नभएको भन्दै आफ्नो सुरक्षा आफैँले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता अतिआवश्यक सामग्री बजारमा आपूर्ति गर्नेतिर ध्यान नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
रोग नियन्त्रणको प्रयास त परै जाओस्, रोगबाट बच्नका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्नेतिर पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
विश्वमा ७० लाख नेपाली रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेसा व्यवसायमा रहेका सरकारी अनुमान छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएका देश दक्षिण कोरिया, कतार, मलेसिया, यूएई, जर्मनी, कुवेत, साउदीलगायतका देशमै करिब १४ लाखभन्दा धेरै नेपाली छन् ।
यीमध्ये ५ प्रतिशतमा मात्र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएमा राज्यले के गर्न सक्ला ? भन्ने आमनागरिकले प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ ।
गत मंगलबार आएको स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विदेशमा रहेका नेपालीमा त्रास झनै बढेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए राज्यले केही गर्दैन कि भनेर उनीहरूको चिन्ता समेत बढेको पाइन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ‘हामी नेपाली नागरिक होइन ?’ भनेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना गुनासासमेत पोखिरहेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू सरकारले कोरोना भाइरसका लागि केही गर्ला भने आसमा रहेका बेला सरकारका जिम्मेवार मन्त्रालयका मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उनीहरूको अवस्था झनै अत्तालिएको रहेको विदेशमा रहेका नेपाली बताउँछन् । यस्तो बेला सरकारले विदेशका नेपालीलाई सान्त्वनाका लागि परामर्शसमेत दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कतार, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र इरानबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई त्यहाँका चिकित्सकले ७ दिनअघिदेखि कोरोनाको सङ्क्रमण छैन भन्ने प्रमाणित गरेर मात्र विदेशी नागरिकलाई पठाइरहेका छन् । रोजगारदाता मुलुकले नै उपचार गरेर मात्र स्वदेश फर्किन दिइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँग एक देशदेखि अर्को देशमा भ्रमण गर्न मानिस डराइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो त्रास त विदेशमा रहेका नेपालीमा छ । उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहे पनि सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले सान्त्वना दिए पुग्छ : विज्ञ
हाल विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक सङ्कट टारिरहेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा यति रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर छाती फुलाएर गर्वका साथ भनिरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
हाल कोरोना भाइरसको त्रासमा विश्वमा रहेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गर्नेभन्दा पनि सान्त्वना दिए पुग्ने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डितले बताएका छन् । कोरोना भाइरस फैलिएसँग अन्य देशले आफ्ना नागरिक उद्धारसँगै उपचारका लागि पहल गरिरहेको विज्ञ पण्डितले बताए ।
‘कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएसँगै प्रभावित देशहरूले विदेशी नागरिक आवतजावतमा रोक लगाइसकेका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिक अन्य देशसम्म जान दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘कोरोना प्रभावित देशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न सरकारलाई सम्भव छैन । २–४ हजार होइन, लाखौँंको संख्यामा छन् । यति ठूलो संख्या उद्धार गर्न सरकारले सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
राज्यसँग जनताले विपत्तिमा परेका बेला हारगुहार माग्ने र यस्तो बेला सरकारको उपस्थितिले आफ्ना नागरिकको मनोबल बढाउने विज्ञ पण्डितको बुझाइ छ । राज्यका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले आफ्ना नागरिकको मनोबल गिराउने खालको अभिव्यक्ति दिनु नहुने उनको तर्क छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य पेसा व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरू सरकारको सान्त्वना र परामर्शको आसमा रहेको विज्ञ पण्डितको भनाइ छ ।
सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा स्वास्थ्य उपचार जस्ता विषयलाई समेटेको हुन्छ । यसका कारण नेपाल ल्याएर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँ रहेका नेपालीको मनोबल बढाउनका लागि काम गरे पुग्ने रोजगारविज्ञको भनाइ छ । कोरोना मात्र होइन, अन्य यस्ता समस्या आए राज्य तर्किन नमिल्ने उनीहरू बताउँछन् ।
तर, सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरमा जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस लागेका बिरामी भेटिए राजधानीबाहिर पनि उपचारका लागि अस्पतालसँग सहकार्य र छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका कोरोना लागे सम्बन्धित देशमै उपचारका लागि पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २९, २०७६, ०१:०६:००